Global Voices teny Malagasy » Pakistana : Mbola Velona Hatrany i Saadat Hasan Manto, Ilay Mpanoratry Ny Vanim-potoana Fitsinjarazaràna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Mey 2012 11:43 GMT 1	 · Mpanoratra Kumail Ahmed Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Atsimo, India, Pakistana, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Saadat Hasan Manto  (1912-1955) dia mpanoratra sombin-tantara, mpanoratra tantara foronina ary koa mpandika teny avy any Punjab. Ankehitriny mankalaza ny faha 100 taonany ny mponina avy ao amin'ny soba kaontinanta  tamin'ny fanindrahindrana ny maha olo-manan-danja azy eo amin'ny fitsinjaram-paritr'i India-Pakistana . Ny Kaonsilin'ny zavakanto Pakistana, fikambanan'ny mpanao gazety, ary ny fikambanan'ny mpanoratra dia mikarakara mitabe ho fahatsiarovana ny lovany sy ny maha-olo-manan-danja azy eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny .
Ny fandraisan'anjara mavitrika nataon'i Manto teo amin'ny literatioran'i Urdu (niaraka tamin'ny fanajàna ny fitsinjarana ) dia ny fanomezany hasina ireo olona Hindus sy Silamo an'arivony namoy ny ainy nandritra ny fifindra-monina izay tahaka ny famonoana ny mpiara-belona fa tsy hoe finoana tokana ihany. Hoy izy hoe :
Aza milaza hoe an'aliny ireo Hindus namoy ny ainy ary an'aliny ireo Silamo namoy ny ainy . Fa ataovy hoe an'alinaliny ireo olona novonoina.
Saadat Hasan Manto. Avy ao amin'ny twitter: @siddharth426
Izany no hafatr'i Manto rehefa tonga tamin'ny fara-tampony ny fisamantsamahana ara-pinoana . Voazarazara ny olona – ary toy ny natokan-toerana mihitsy – nohon'ny tsy fitovian'ny antoko-pinoany ary tsy nihevitra ny famonoana ho toy ny heloka bevava atao amin'ny olombelona . Tamin'ny fotoana tahaka izany, Manto dia nijoro ho toy ny mpitondra ny hafatra maha-olombelona teo amin'ny literatioran'ny soba kaontinanta. Tantara foronina toy ny ‘Toba Tek Singh’ (anaranà tanàna Pakistane ao Punjab), no nosoratany izay nanehony ny fahantran'ny fitsinjaràzarana.
Fa mbola ilaina ve i Manto ankehitriny? Eny! Tena mbola ilaina tanteraka izy. Ny fanakianany ny fiarahamonina mpihatsaravelatsihy , ny fihetsiny manoloana ny fadifady ao amin'ny fiarahamonina sy ny fomba fiaina  [ur], ary ny fitsikerany an'i Etazonia  no mahatonga azy ho angano velona . Manto, hoy i Zahida Hina nilaza mazava  , dia mpitsijo lavitra.
Ny asa-soratr'i Manto, dia afaka hanampy ny mponina ao Pakistana hiala amin'ny lavaka mangitsokitsoky ny “integrisme ” sy ny “extremisme” ankehitriny izay miha mitombo isan'andro isan'andro . Ny krizy ara-politika sy ara-kolontsaina izay atrehan'i Pakistan amin'izao fotoana izao dia efa tsinjon'i Manto taona maro lasa izay tao amin'ny lahatsorany ‘Allah ka bara fazl ha’ (Tsy misy fetra ny famindram-pon'Andriamanitra).
Tondraka fanehoan-kevitra mikasika ny fiainan'i Manto sy ny asany ny filazam-baovao sosialy samihafa.
B. P. Singh dia nanandratra an'i Manto  tamin'izao teny manaraka izao :
Lehilahy mahery, tena olombelona tokoa, efa nandray anjara tamin'ny tantara an-dapihazony aho tao India, ary lazaiko marina fa narahako tamim-pinoana tokoa ny sasany tamin'izay nosoratany. Raha tena manaraka ny ati-fanahin'izay voalaza ao avokoa ny olona rehetra , dia tena ho lasa paradisa izao tontolo izao ! tena manome voninahitra sy miarahaba an'ilay lehilahy mahafinaritra ‘Manto’ aho.
Bitsika sasantsasany :
@navedjaved  : Mahatsiaro ilay mpanoratra iray lehibe sy nahay tamin'ny fotoan'androny , Saadat Hasan Manto tamin'ny fitsingerenan'ny taona nahaterahany- RIP ry olo-malaza!
@manish0891  : Fahatsiarovana ny faha 100 taonan'i Saadat Hasan #Manto , iray amin'ireo mpanoratra sombin-tantara foronina amin'ny fiteny Urdu .
@osamamotiwala  : Saadat Hasan Manto, na dia mijanona ho tsiaro ihany aza ianao , misy kosa ireo tsiaro izay maharitra mandrakizay. Mamirata ihany ianao ilay diamondra .
Tsy mba natahotra izany i Manto tamin'ny fanehoana ny heviny . Efa niakatra fitsarana noho ny asa sorany izy. Kanefa , i Manto dia tsy nanoratra afa-tsy izay hitany ihany. Nazir Ahmed Minto dia nilaza fa :
Manto dia tsy nanoratra afa-tsy izay HITANY,…… ary izay tsy tian'ireo olona ireo jerena loatra !
Naveeda Valentina nandefa bitsika hoe :
@NaveedaV  : Janam din mubarak (Tratry ny fitsingerenan'ny nahaterahanao ) Saadat Hasan Manto! lehilahy izay tsy nijery ny tombotsoany manokana . *jaam chalkaoing*
@NaveedaV  : Tratry ny fitsingerenan'ny nahaterahanao ianao ry Saadat Hasan Manto! lehilahy izay tsy nijery ny tombotsoany manokana .
Notolorana fandrakofana manokana tao amin'ny filazam-baovao tao Pakistana mihitsy i Manto (amin'ny teny anglisy, jereo ny : DAWN , THE NEWS ). Mendrika ny ho deraina izany tranga izany matoa lazaina . Ary na dia efa nitombo be aza ny fanarahana an-jambany tao amin'ny fiarahamonina, mbola velona hatrany ny feon'i Manto .
Ahmed Shakeel nandefa bitsika hoe :
@Ahmed_Shakeel  : Mampihetsi-po be ny mahita ny fahazato taonan'ilay fahaterahanà mpanoratra sombin-tantara foronina amin'ny teny Urdu, Saadat Hasan Ahitana an'i Manto, nahazo fandrakofana manokana sy goavana, indrindra indrindra fa tany amin'ny filazam-baovao tsy mampiasa ny teny Urdu.
Nodimandry teo amin'ny faha 43 taonany i Manto ny 18 Janoary 1955. Ny fisainany dia miaraka amintsika hatrany . Vivek Martolia dia nanambara fa :
manto sahab amar rahenge hamesha ke liye , velona ao amin'ireo tantarany izy .
Ho velona mandrakizay i Manto , velona ao amin'ireo tantarany izy .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/05/16/33274/
 Saadat Hasan Manto: http://en.wikipedia.org/wiki/Saadat_Hasan_Manto
 mankalaza ny faha 100 taonany ny mponina avy ao amin'ny soba kaontinanta: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-05-13/chandigarh/31689366_1_manto-daughters-nusrat-jalaal-samrala
 ny fihetsiny manoloana ny fadifady ao amin'ny fiarahamonina sy ny fomba fiaina : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.202564799761542.50038.117654531585903&type=3
 fitsikerany an'i Etazonia : http://www.facebook.com/note.php?note_id=202562563095099
 nilaza mazava : http://dawn.com/2012/05/06/manto-centenary-how-relevant-is-manto-today/
 dia nanandratra an'i Manto: http://dawn.com/2012/05/09/a-discussion-on-saadat-hasan-manto/
 dia nilaza fa: http://tribune.com.pk/story/376793/my-own-personal-manto/
 THE NEWS: http://jang.com.pk/thenews/may2012-weekly/nos-06-05-2012/manto/index.asp
 dia nanambara fa : http://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/Another-10-days-for-Manto-daughters-to-reach-India/opinions/13116637.cms